ကချင်နှင့် ရခိုင် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကချင်နှင့် ရခိုင် ပညာရေး ရန်ပုံငွေ နိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်
Posted by we R one on Aug 24, 2012 in Copy/Paste, Education, Events/Fundraise, Society & Lifestyle | 11 comments
In 2011, Myanmar Youths in Action and5other Yangon-based youth volunteer groups joined together for relief efforts during the Pakkokku floodings. This year’s June, this group has also donated more than 80 lakhs personally to the victims of the clashes in Rakhine State.
Now, with more youth groups have joined together to holdacharity funfair for educations funds for Kachin and Rakhine students. An individual group may not have the might to do these tasks, but with the unity of all youth groups, this event was organized with hopes of support from the public.
Kachin children, victims ofalong-going civil war, and the Rakhine children, victims of recent communal clashes, still faces obstacles in furthering education. Therefore, your contribution will be greatly appreciated for these children to continue their education so that they can createabrighter future for themselves.
17 youth organizations have joined hands together for this event. We will be offering food to the guests at the funfair, plus many great programs such as unplugged live show with artists such as Song Oo Hlaing, Yatha, Kyat Pha, and Melody World singers, caricature drawings, nail art, tarot predictions, photo gallery, and many other fun programs for everyone!
Therefore, we cordially invite all to participate in this charity funfair!!
Charity Funfair for Education Fund of Kachin and Rakhine Students
Place: Taw Win Centere, 1st Floor
Yangon Domicile Youth Volunteers
Myanmar Youths in Action | Plus You | Youth Volunteer Group | Social Team for the Aged | San Yay Kyi | Smart Group | Volunteer Internship Group | Chalk | Saytanar Shin Lu Nge Myar | Tree Publication | Bad Boys | Myanmar Helping Hands | Way Mhya Chan Thar | Green for Generation | White Sharing | Myanmar Story Tellers | Than Zin Lu Nge Myar
မုန့်တွေများကြီး စားရမှာ.. ရခိုင်သင်္ဘောသီးထောင်း ၊ ရခိုင်ကြာဆံသုတ် ၊ လှော်ဇာ ၊ Sandwich ၊ ဘာဂါ ၊ ဝေဖာနို့ဆီသုတ် ၊ ရှမ်းထမင်းချဉ် ၊ လဖက်ထမင်းသုတ် ၊ ဆေးဘဲဥသုပ် ၊ မုန်လာဥနီသုတ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုတ် ၊ မုန့်လက်ဆောင်း ၊ ဆနွင်းမကင်း ၊ ရွှေကြည် ၊ အအေးမျိုးစုံ ၊ အိုဗာတင်း ၊ ကော်ဖီ ၊…. အားးးးးးးးးးးး စားမယ် လှူမယ်… လာကြနော်.. တော်ဝင်စင်တာ
ရခိုင်သင်္ဘောသီးထောင်း နဲ့ လဖက်ထမင်းသုတ် စားချင်တယ်ဗျို့ !
စားချင်ရင် လာခဲ့လေ ….မနက် ကိုး ည ကိုးနော်… ။
အီး — အဝေးကြီးဗျ !
ဝရုံးလေးနဲ့ အတူ အဲဒီပွဲမှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်လောက် အတူဆိုချင်တာ
အမောင်ချေ အန်းဂလိပ်လို မဖြတ်တတ်ကြောင်း
မိမိချေ ပို့စ်(ရခိုင်လို မပြောတတ်) ဖတ်ပီး
ရာမောင်သားတို့ အရေး တွီးမိလို့ ပရော်ကြောင်း …
သတင်းပေးတာနဲ့ တန်အောင် သွားဖြစ်အောင် ယနေ့ ညပိုင်း ရုပ်ရှင် တကားပြီးရင် သွားစားလိုက်မယ်။
လက်မှတ်ကိုင်ထားတဲ့သူ ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိနေသလိုပဲနော်….
Thank you for your post. We Rome. Long time no see.
မနေ့ညက ရောက်သွားတဲ့ အချိန်က ၈နာရီပဲ ရှိသေးတယ် အားလုံး သိမ်းဆည်းပြီး ပြန်နေကြပြီ။ ၉နာရီ အထိ ဆိုလို့ အလုပ်ပြီးတဲ့ အချိန် သွားတာ.. နောက်ကျသွားတယ်။ မ၀ယ်စားလိုက်ရဘူး။ ဈေးပဲ ပတ်ခဲ့တယ်။
အာ ပို့စ်ဝင်ဖတ်တဲ့ အချိန် နောက်ကျသွားတယ် … လွတ်သွားပြီ ။